Moya China LR Udaka Pump Iinxalenye umzi-mveliso kunye nababoneleli |Arex
I-L-Type ye-Slurry Pump impeller
Izinto zerabha esizisebenzisileyo zinokuchasana okuphezulu kuzo zonke ezinye izinto kwi-particle particle slurry applications.I-antioxidants kunye ne-anti-degradants esetyenzisiweyo kwizinto zethu ziye zaphuculwa ukuphucula ubomi bokugcina kunye nokunciphisa ukuthotywa ngexesha lokusetyenziswa.Ukumelana nokukhukuliseka okuphezulu kubonelelwa ngokudityaniswa kokuqina kwayo okuphezulu, ukomelela okuphezulu kunye nobunzima obuphantsi bonxweme.
Siyazingca ngokwenza iimpompo zempompo yerabha eludaka kunye nezinye iindawo ezitshintshiweyo zempompo ethile eyaziwayo, eziyi-100% REVERSE INTERCHANGEABLE.
*UHlobo lwe-L lweData ye-Slurry Impompo:
* Uhlobo lweMathiriyeli yeRubha kunye neeNkcazo zeDatha:
I-R26 I-Anti-thermalIrabha yokuqhekeka Irabha yendalo I-R26 yirabha yendalo emnyama, ethambileyo.Inokumelana nokhukuliseko oluphezulu kuzo zonke ezinye izinto kwi-particle particle slurry applications.I-antioxidants kunye ne-anti-degradants esetyenziswe kwi-RU26 iye yaphuculwa ukuphucula ubomi bokugcina kunye nokunciphisa ukuthotywa ngexesha lokusetyenziswa.Ukumelana nokukhukuliseka okuphezulu kwe-RU26 kubonelelwa ngokudityaniswa kokuqina kwayo okuphezulu, ukomelela okuphezulu kunye nobunzima obuphantsi be-Shore.
I-R33 Irabha yendalo(Ithambile) Irabha yendalo I-YR33 yirabha yendalo emnyama ekumgangatho ophantsi kwaye isetyenziselwa isitshingitshane kunye neentambo zokumpompa kunye ne-impellers apho iipropathi zayo eziphezulu zomzimba zinika ukonyuka kokuchaneka kokusikwa kwi-slurries eqinile, ebukhali.
I-R55 I-Anti-thermalIrabha yendalo Irabha yendalo I-YR55 yirabha yendalo emnyama, echasene nomhlwa.Inokumelana nokhukuliseko oluphezulu kuzo zonke ezinye izinto kwi-particle particle slurry applications.
S01 Irabha ye-EPDM Elastomer yokwenziwa
S12 Irabha yeNitrile Elastomer yokwenziwa I-Elastomer YS12 yirabha eyenziweyo esetyenziswa ngokubanzi kwizicelo ezibandakanya amafutha, ioyile kunye newax.I-S12 inokumelana nokukhukuliseka okuphakathi.
S31 I-ChlorosulfonatedPolyethylene (Hypalon) Elastomer yokwenziwa I-YS31 yi-oxidation kunye ne-elastomer ekwazi ukumelana nobushushu.Inolungelelwano oluhle lokumelana neekhemikhali kuzo zombini iiasidi kunye ne-hydrocarbons.
S42 Polychloroprene (Neoprene) Elastomer yokwenziwa I-Polychloroprene (i-Neoprene) yi-elastomer yokwenziwa yamandla aphezulu eneempawu eziguqukayo kuphela ngaphantsi kancinane kwirabha yendalo.Ayinakwenzeka kancinci ngobushushu kunerabha yendalo, kwaye inemozulu entle kakhulu kunye nokumelana ne-ozone.Ikwabonisa ukumelana ne-oyile okugqwesileyo.
Uhlobo lwe-L-Type ye-Slurry Pump ye-Frame Plate Liner
Iilitha zerabha zempompo eziludaka ngamalungu amanzi kwiimpompo eziludaka ezinerabha ezikhokelela eludaka kwindawo yokuphuma.
Uninzi lweempompo ezinodaka lwerabha zisebenzisa iilayini zohlobo lwerabha ezinolwahlulo lwevolute, enye yilayini yesakhelo sepleyiti yesakhelo, kwaye enye yiplate yokugubungela, esi sakhiwo siyilelwe ukwenza ukutshintshwa kube lula.
Iilitha zethu zerabha empompo eziludaka ziqhele ukwenziwa ngerabha yendalo eyi-premium eyi-R55 ebonelela ka-1.5 kubomi benkonzo yerabha eqhelekileyo ye-R26.
*UHLOBO L OLUNYANGA LWEENKONZO IIDATHA ZOPHUHLISO
L-UHLOBO LWE-LLURRY PUMP IIMPAWU EZINGUNDOQO/IZINZUZO
● Ulwakhiwo olunzima ngoyilo lwebholithi lubonelela ngokulula kugcino kwaye lukhokelela kwixesha elincitshisiweyo
● I-Ductile iron casing egcwele i-casing inika ukuqina, amandla kunye nobomi benkonzo ende
● Idayamitha enkulu, ukujika okucothayo, ii-impellers ezisebenzayo (ukuya kuma-90%+) kubangela ubomi bokunxiba kunye neendleko eziphantsi zokusebenza.
● Iipaseji ezinkulu, ezivulekileyo zangaphakathi zinciphisa isantya sangaphakathi esenza ukuba ubomi bunxitywe bubangele iindleko eziphantsi zokusebenza
● I-elastomer eshinyeneyo okanye iibholiti zentsimbi zinika amandla okuxhathisa umhlwa kwaye zibonelela ngokulula kokutshintsha kwe-liner kunye nokuxutywa phakathi ukuze kuncitshiswe iindleko zokugcinwa kwazo zonke kunye nokwandisa ubomi bokunxiba.
● Yenzelwe imisebenzi enzima ngelixa ibonelela ngobuchule obuphezulu
● I-shaft encinci / i-impeller overhang inciphisa ukuphambuka kwe-shaft kunye nokwandisa ubomi bokupakisha
● I-Cartridge-style bearing assembly ivumela ukugcinwa kwindawo ecocekileyo ngaphandle kokususwa kwempompo, okukhokelela ekusebenzeni okuthembekileyo kunye nobomi obude bokuzala.
● Iindlela zokuhlanganisa igrisi okanye i-oyile zinika ukugcinwa lula kunye nokunciphisa ixesha
● Idlala eligungxulayo elipheleleyo, ukuhamba okuphantsi, kunye nokuhamba komile kwezitywina ze-centrifugal kunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi okugungxulwa kucutha iindleko zokusebenza kwempompo.
● Ukutywinwa koomatshini kucutha ukusetyenziswa kwamanzi okugungxulwa kucuthwe iindleko zokusebenza kwempompo
● Ukhukuliseko kunye nee-elastomers ezikwaziyo ukubola okanye ialloys ziyafumaneka ukuze zikwazi ukuphatha izinto eziqinileyo kunye/okanye udaka olunomhlwa.
● Impompo enzima yokuludaka kwiintloko eziphakathi ukuya kwezisezantsi
● Izithuthi ezithambekileyo
*UHLOBO LOKUKHUPHA IIMPOMPU ZOKUKHUPHA KWEPLATE LINER DATA
Uhlobo lwe-L-Type lwePump ye-Slurry Cover Plate Liner
Ngaphambili: SAG/AG/Ball/Rod Milling Rubber Liners
Okulandelayo: Imibhobho yomoya
© Copyright 20102021 : Onke Amalungelo Agciniwe.> Umnatha wesikrini Metallic Ukwandiswa Joint Isilayidi seValve yesibaso ISeismic Expansion Joint Ivalufa yokulawula umoya 50mm Flexible Rubber Hose Zonke iimveliso